Akhristaha kaarka SD iyo isku xira HDMI ee MacBooks cusub? | Waxaan ka socdaa mac
Xanta kala duwan ayaa soo jeedinaysa taas MacBook-yada cusub ee sanadkaan waxay ku dari karaan aqriyaha kaarka SD iyo isku xiraha HDMI oo lagu daray USB C Thunderbolt ports. Hirgalintani waxay noqon kartaa mid u gaar ah kumbuyuutarrada 14-inji ah iyo 16-inji ah ee la xamanayey toddobaadyo waxaana suuragal ah inay yimaadaan sannadkan. Naqshadeynta MacBook-ka ee lagu soo bandhigi karo shaashadda miniLED ayaa sidoo kale la socon doonta isbeddelkan ku yimid dekedaha.
Waxa cad waa taas waxaan ahayn dhowr sano oo kumbiyuutarrada Apple ay ficil ahaan uga dhammaadeen dekedaha oo kaliya USB C dekedaha ayaa lagu daraa ikhtiyaarka lacag bixinta, wareejinta fiidiyowga iyo kuwa kale, sidaa darteed waxay u muuqataa wax la yaab leh in aan hadda yeelan doonno kuwan dekadaha HDMI iyo akhristaha kaararka SD-ka oo mar kale la dhisay.
Maanta Xitaa waxaa lagu xantaa in IPhone laga tagi doono iyadoo aan lahayn deked hillaac ah, wax wali xanta ku sii socda oo aasaas yar leh laakiin falanqeeyayaasha qaar ay ka digayaan inay dhici karto. Taasi waa sababta loogu darayo dekedaha HDMI iyo akhristaha kaarka SD ee ku yaal MacBooks oo u muuqda mid aan macquul ahayn.
Xantaan cusub ee ka soo baxday dhowr bog sida iPhone hacks, Shaqsiyan waxaan aaminsanahay in ay tahay wax aan macquul aheyn in Apple ay aragto dariiqeeda Mac. Dhanka kale waxay noqon laheyd mid xiiso leh haddii ay ku dhameystaan ​​iyaga oo ku daraya sababo muuqda awgood sida inaan loo isticmaalin qalabka USB C Hub si loogu xiro fiilooyinkaan qalabka, laakiin waxaan arkaa inay tahay arrin aad u cakiran marka la fiiriyo wixii aan aragnay sanadahan iyo isbadalka Apple ee aaladeeda, kaliya maahan Mac. waxa dhaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » Akhristaha kaarka SD iyo isku xira HDMI ee MacBooks cusub?
Apple waxay qaban doontaa dhacdo toos ah si ay u soo bandhigto dukumintiga ku saabsan Billie Eilish